Desktop icons လေးတွေကို Slide Bar ပုံစံမျိုးပေါ့.. mouse ကိုတင်လိုက်တာနဲ့ ရွေ့ရွေသွားတာဗျ.. မိုက်တယ်. ~ ITmanHOME
10:50 window7, နည်းပညာ No comments
Desktop icons လေးတွေကို Slide Bar ပုံစံမျိုးပေါ့.. mouse ကိုတင်လိုက်တာနဲ့ ရွေ့ရွေသွားတာဗျ.. မိုက်တယ်.
သယ်ရင်းတို့ရေ ခုနက ကျနော်မေးထားတဲ့ဟာလေး လုပ်လို့ရပြီဗျ..အဲဒါ သယ်ရင်းတို့သိရအောင်ပြန်ရှယ်လိုက်တယ်နော်....
Desktop icons လေးတွေကို ပုံထဲကအတိုင်းလေးလုပ်ချင်တာဗျ..
Slide Bar ပုံစံမျိုးပေါ့.. mouse ကိုတင်လိုက်တာနဲ့ ရွေ့ရွေသွားတာဗျ.. မိုက်တယ်.... ~~~~~~
ကွန်ပြူတာမှာလေ ဒီဓါတ်ပုံလေးထဲကအတိုင်း desktop icons လေးတွေကိုထားရအောင်...
ပထမဦးစွာ rocketdock ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ..
RocketDock ကို ဒေါင်းပြီူးရင် အင်စတော လုပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် Create Desktop Icon ကို အမှန်ခြစ်ပေးခဲ့ပါ။
Desktop ပေါ်က Icon ကို Run ပါ Dock Setting မှာ Setting တွေ နည်းနည်းပြန်ပြင်ပေးပါ ။
ပြီးရင် ကိုလိုချင်တဲ့ Icon ကို Drag N Drop ဆွဲပြီး ဘားတန်းပေါ်တင်ပေးပါ ပြီူးရင် Lock Icon ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီူး
rocketdock 1.3.5 ကို ဒေါင်း ဖို့အတွက် လင့်လေးရေးထားပေးတယ်နော်။
အောက်က လင့်(ခ်) ကနေ download ဆွဲလို့ရပါတယ်....
အဆင်ပြေပါစေနော် သယ်ရင်းတို့ .......
credit Jerry Milky Punk